Regional Sales Supervisor Archives - Glory Assumption Space
Regional Sales Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / တောင်ကြီးမြို့
Regional Sales Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) / တောင်ကြီးမြို့ ။ • FMCG နှင့်ပတ်သက် သည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ )နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • ကားမောင်းတတ်သူ ဦးစားပေးမည် ။ • English စာအနည်းငယ်ပြောနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • တောင်ကြီးနယ်ခံဖြစ်ရမည် ။ • တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည် ။ • တောင်ကြီးမြို့ရှိ FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောာင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ကြီးမြို့ရှိ FMCG Distribution ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁) Regional Sales Supervsior – Female – ( 10 ) Posts - လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - လသာမြို့နယ် ။
၁) Regional Sales Supervsior – Female – ( 10 ) Posts - လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) - လသာမြို့နယ် ။(လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍ လစာညှိုနှိုင်းနိုင်ပါသည်။) (အင်တာဗျူးအမြန်ဝင်ရမည်။) (Company မှတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးအမြန်ဝင်ရမည်။) • အလှကုန်လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်နှင့်အထက် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ • နယ်သို့မကြာခဏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ • အထက်တန်းအဆင့် (သို့) အထက်တန်းအောင်ရမည်။ • အသက် ၁၈ မှ ၃၀ကြားဖြစ်ရမည်။ • နယ်သို့ ရက်ရှည်ခရီးသွားရန် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် (၉ နာရီ မှ ၅း၃၀ အထိ) • တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်ပါသည်။ • အလှကုန်ပစ္စည်း Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါ တည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကေ်ာင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Regional Sales Supervisor – Female (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Cosmetic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Regional Sales Supervisor – Female (5)Posts /လစာ - ၁၅၀,၀၀၀ ~ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - နယ်သွားနိုင်ရမည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Regional Sales Supervisor –Female (5) Posts / Salary -300,000 Kyats
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Cosmetic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလို ရှိသည်။တပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Regional Sales Supervisor –Female (5) Posts / Salary -300,000 Kyats / Lanmadaw Township Job Description - အလှကုန်လုပ်ငန်းတွင် အတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်နှင့်အထက် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ - အောက်မြန်မာပြည်၊ အထက်မြန်မာပြည်ရှိ အလှကုန်လက်ကားဆိုင်များ၊ saloon ဆိုင်များ၊ စတိုးဆိုင်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ သွားလာနိုင်ရမည်။ - နယ်သို့မကြာခဏ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ - အလုပ်တွင်စေ့စပ်သေချာပြီး အရောင်း target ပြည့်မှီအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။ - ရောင်းအားအပေါ်မူတည်၍ ကော်မရှင် များများသီးသန့် ခံစားခွင့်ရရှိမည်။ Position Requirements - အထက်တန်းအဆင့် (သို့) အထက်တန်းအောင်ရမည်။ - အသက် ၁၈ မှ ၃၀ကြားဖြစ်ရမည်။ - ရုပ်ရည်သန်ပျံ့ပြီး ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - နယ်သို့ ရက်ရှည်ခရီးသွားရန် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Regional Sales Supervisor - Male (7) posts / Salary - 300,000 Above kyat .
****************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1 . Regional Sales Supervisor - Male (7) posts / Salary – 300,000 Above kyat / Shwe Pyi Tar Township . -	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ Sales & Marketing Certificate ရရှိထားလျှင် ပို၍သင့်တော်သည် ။ -	Microsoft Office Excel အနည်းငယ်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ -	Sales & Marketing Field တွင်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၄) နှစ်ရှိရမည်။ -	အသက်(၂၅) နှစ်မှ (၃၅)နှစ်အထိ ။ နယ်သို့အရောင်းသွားနိုင်ရမည်။ -	Customer Relationship Management ကိုကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်စွာ သိရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ -	ရေသန့်နှင့် အချိုရည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းတွင်အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
***************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1 . Regional Sales Supervisor - Male (7) posts / Salary – 300,000 Above kyat / Shwe Pyi Tar Township . - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ Sales & Marketing Certificate ရရှိထားလျှင် ပို၍သင့်တော်သည် ။ - Microsoft Office Excel အနည်းငယ်အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ - Sales & Marketing Field တွင်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၄) နှစ်ရှိရမည်။ - အသက်(၂၅) နှစ်မှ (၃၅)နှစ်အထိ ။ နယ်သို့အရောင်းသွားနိုင်ရမည်။ - Customer Relationship Management ကိုကျွမ်းကျင်နှံ့စပ်စွာ သိရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - ရေသန့်နှင့် အချိုရည်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသည့်လုပ်ငန်းတွင်အကြုံရှိသူကို ဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )